Home » Lahatsoratra farany farany » Tourism » Toerana aiza no misy ireo mpizahatany mahalala fomba indrindra?
Vaovao farany momba ny Hawaii • Hospitality Industry • Vaovao • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Ireo mpizahatany mahalala fomba indrindra
Raha resaka fitsangatsanganana iraisampirenena, efa ela no nijoroany, ary angamba tsy ara-drariny, stereotype fa tsy ny mpizahatany amerikanina no mpizahatany mahalala fomba indrindra, manana fahasoavana ara-tsosialy vitsivitsy ary miavaka amin'ny maha be feo sy maharikoriko azy. Ity fomba fijery ity dia mety hiova amin'ny vanim-potoana aorian'ny COVID, satria toerana iraisampirenena no tadiavin'ny mpizahatany amerikanina.
Fantatrao ve fa ny olona avy any Hong Kong dia mankahala ny hihiratra?
Sa hoe tsy faly ny Japoney mitsiky?
Ny fihetsika na fanehoan-kevitra diso ataon'ny tànana dia mety hampihena ny toe-javatra mandeha ratsy.
Raiso ny tari-dalana rehetra mety ho hitanao fa misy fizarana natokana ho an'ny karazan-kolontsaina manokana izay mety hohalalininao alohan'ny alohan'ny dia lavitra. Fa manao ahoana ny toetran'ny Amerikanina ao anatin'ny sisintaniny? Ny vohikala fifanarahana fialan-tsasatra, NextVacay.com, dia namorona “index des fahalalam-pomba fizahan-tany” hamaritana, isaky ny fanjakana, izay ananan'ireo Amerikanina ny laza tsara indrindra sy ratsy indrindra rehefa miala sasatra any an-trano izy ireo.
Nanadihady olona 3,000 izy ireo ary nangataka tamin'ny valintenin'izy ireo ny fahalalam-pomba fizahan-tany amin'ny ambaratonga 1 ka hatramin'ny 10. Hita fa ny mpizahatany mahalala fomba indrindra dia avy any Alaska, manana laharana 8/10 matanjaka amin'ny fomba fitetezam-paritany. Fantatra fa milamina tsara izy io, mety tsy mahagaga raha ny mpitsangatsangana any Alaska no tena laharam-pahamehana - ny olona tsara ao amin'ny The Last Frontier dia mahay mandehandeha ihany koa - ny lalambe lalambe Alaska Interstate dia misy lalana 4 fotsiny, ka zatra tsara manana mampifanaraka ny drafitry ny dia tsy misy fitarainana.
Hawaii laharana faha-2
Mety tsy mahagaga izany raha jerena fa fantatry ny fanjakana fa malaza ho azy io Aloha Fanahy izay miraraka amin'ireo mpizahatany izany fitsidihana izany. Manao ahoana ny faharatsian'ny toerana iray, rehefa arahabaina fehiloha fehezam-boninkazo ianao ary faly ny mponina manampy amin'ny torolàlana sy ny tolo-kevitra, miaraka amin'ny "Tsy misy ahiahy" rehetra ao anatin'ny fitarihan'izy ireo? Misy antony marim-pototra antsoina hoe paradisa.
Mpizaha tany mahalala fomba
Maherin'ny 1 amin'ny 3 no nilaza fa nanao vakansy simba tamin'ny fitondran-tena ratsy nataon'ny mpizahatany hafa. Ny mpizaha tany fahalalam-pomba LEAST kosa dia ireo avy amin'ny fanjakan'ny Washington, izay 4 tamin'ny 10. Ny fanjakana Evergreen dia mety hanana toerana ambony hatrany raha ny amin'ny fanjakana tia tontolo iainana no jerena. . Araka ny fanadihadiana natao tamin'ny taona 2019, mihoatra ny antsasaky ny mponina any Pasifika Avaratra-Andrefana no tsy te hiresaka vetivety amin'ny olona tsy mbola fantany akory. Manome fahatokisana ilay fisehoan-javatra fantatra amin'ny anarana hoe "Seattle Freeze" - izay manondro ny fiheveran'ny besinimaro fa sarotra be ny mahazo namana vaovao ao an-tanànan'i Seattle, Washington. Raha tsy mifanerasera manokana amin'ireo rahalahiny eo an-toerana izy ireo, dia mety tsy mahagaga raha tsy mamin'ny olona avy any amin'ny fanjakana hafa izy ireo rehefa miala sasatra. Mitovy amin'ny tsy fahalalam-pomba, ny mpizahatany avy any Connecticut dia nilahatra 4 tamin'ny 10.
Fanondroana fahalalam-pomba fizahan-tany ataon'ny mpizahatany
Toa hita ihany koa fa tsy dia tsara ny fomba fijerin'ny Amerikanina ny mpiray tanindrazana aminy rehefa mivezivezy any ivelany izy ireo. Tsy latsaky ny antsasaky no mieritreritra fa mahalala fomba ny mpizahatany amerikanina any ivelany ary noho izany dia tsy maneho tsara ny fireneny - izay mitaona 68 isan-jaton'ny valinteny lehibe hiaiky fa tsy handeha any amin'ny toeran-kafa raha fantany fa manana laza ratsy izy ireo. Ery.
Akaiky ny trano dia efa ho ny antsasaky ny (42 isan-jato) tamin'ireo nohadihadiana izay mipetraka amin'ny toerana mafana fizahan-tany dia nilaza fa hiala tokoa (raha afaka) amin'ny vanim-potoanan'ny fialantsasatra mba hialana amin'ireo mpizahatany fotsiny. Ary ny olona 1 amin'ny 3 no namaly fa nanao vakansy an-trano izy ireo noho ny fitondran-tena ratsy nataon'ny mpitsangatsangana hafa. Eny tokoa, mety misy fotoana manokana amin'ny taona - toy ny Spring Break - izay mety hahasarika ny mpizahatany tsy dia tsara fitondran-tena.
Na eo aza ny stereotypes, mamporisika ny 82 isan-jaton'ny mpizahatany amerikana milaza fa hanaraka tsara ny protokolon'ny COVID rehefa mandeha any ivelany, toy ny manao saron-tava sy ny fanalavirana ny fiaraha-monina.
Farany, 38 isan-jato no miaiky fa tena malahelo an'i Amerika izy ireo rehefa any ivelany.
Tsimpanzee, vorona, fiarovana ny bibidia vao nifarana tamin'ny...
Nakatona ny Kianja Mena Moskoa taorian'ny rindrin'i Kremlin...